Ụgbọ okporo ígwè njem Austria Archives | Save A Train
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Lush na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, echiche nnukwu kaniyon, osimiri, ma ọ bụ obodo ndị mara mma, Europe jupụtara na ebe dị ịtụnanya maka ịma ụlọ ezinụlọ. The 10 kacha mma ezinụlọ maa ụlọikwuu aga Europe na-zuru okè n'ihi na n'oge okpomọkụ ememe, na ọbụna oyi. Ha niile nwere echiche mara mma na okike, and most…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Obodo ọmarịcha obodo ochie ndị mara mma na Europe bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ike nke akụkọ ntolite Europe. Quaint obere ụlọ, nnukwu katidral dị n'etiti obodo ahụ, ụlọ ndị echekwara nke ọma, na n’ámá ndị ọzọ na-agbakwunye na anwansi nke obodo Europe. na 5 ochie mara mma…